स्वास्थ्य पेज » डाइटिङको साइड इफेक्ट, शरीरले दिन्छ यस्तो संकेत डाइटिङको साइड इफेक्ट, शरीरले दिन्छ यस्तो संकेत – स्वास्थ्य पेज
unhappy asian women is on dieting time looking at broccoli on the fork. girl do not want to eat vegetables and dislike taste of broccoli.; Shutterstock ID 1051628996; Purchase Order: -
शरीरले यस्तो संकेत दिन्छ, जब अहिले धेरैलाई मोटोपनको समस्या छ । मोटोपन कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यसमा धेरैले अपनाउने विकल्प हो, डाइटिङ । अर्थात उपवास । मोटोपन बढ्नुमा खाना नै जिम्मेवार छ र खानामा कटौती गरेपछि मोटोपन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आम बुझाई छ । भलै कतिपय चिकित्सकले यसलाई सही मानिरहेका छैनन् ।
यद्यपि खानामा कटौती गर्ने वा छाक नै छाड्ने क्रम भने उस्तै छ । मोटोपनले गाँज्न थालेपछि अधिकांशले खाना छाड्ने गरेका छन् । जबकी खाना छाड्दैमा मोटोपन नियन्त्रण हुने भन्दा पनि यसले अरु स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने खतरा रहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
डाइटिङ गर्नेहरुले अक्सर के गल्ती गर्छन् भने लामो समय भोकै रहन्छन् । जब खाना खान्छन्, तब आवश्यक्ताभन्दा निकै बढी खाइदिन्छन् । एकै पटकमा धेरै खाना खाइदिन्छन् । यसले मोटोपन नियन्त्रण हुने भन्दा पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
डाइटिङ गर्नु भनेको खाना छाड्नु होइन । बरु, सन्तुलित र उचित मात्रामा खानु हो । जब डाइटिङको चक्करमा खाना छाड्छौं, शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व कमी हुन्छ । आफ्नो शारीरिक गतिविधि अनुसार पनि उचित मात्रामा खाना खानुपर्ने हुन्छ । खानाको मात्रा कम भएमा मोटोपन नियन्त्रण हुने भन्दा पनि शरीर रोगी हुन्छ ।
डाइटिङको क्रममा शरीरको मेटाबोलिज्म कम हुन्छ, जसले शरीरमा हर्मोन परिवर्तन हुन्छ । यसले महिलामा अनियमित मासिक स्रावको समस्या बढ्छ । यदि यस्तो संकेत देखिएमा डाइटिङ बन्द गर्नुपर्छ ।